Wariyihii Maleesiyaanka ee lagu diley Muqdisho oo dalkiisa lagu aasay+Sawiro – SBC
Wariyihii Maleesiyaanka ee lagu diley Muqdisho oo dalkiisa lagu aasay+Sawiro
Posted by editor on September 4, 2011 Comments
Noramfaizul Mohd Nor oo ahaa cameraman u dhashay wadanka Maleysiya oo ku dhintey tacshiirad la aaminsan yahay inu ku fureen gaari uu saarnaa ayaa maanta lagu aasay shaqeyaney Telefishin laga leeyahay qabuuraha Muslimiinta ee ku yaal Jaamacada Universiti Putra Malaysia (UPM) ee magaalada Serdang ee gobolka Kedah ee waqooyiga Galbeed ee dalka Maleysiya.
Aaskii filimqaade Nor ayaa waxaa ka soo qayb galey masuuliyiin ka tirsan dawlada Maleysiya, qaybaha warbaahinta, madaxda & shaqaalaha Tv-gii uu ka shaqeynayey & qoyskiisa
Waxaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galey wasiirka warfaafinta, Isgaarsiinta, & dhaqanka
Datuk Seri Dr Rais Yatim, wasiirkii hore ee warfaafinta Tan Sri Zainuddin Maidin, xildhibaanka baarlaman Teresa Kok, madaxweynaha ururka Putera 1Malaysia Club oo ah ururkii samafal ee uu la socdey filimqaadaha la diley Datuk Abdul Azeez Abdul Rahim iyo xubno kale.
Noramfaizul, oo 39 sano jir ahaa waxaa jimcadii uu ku dhintey magaalada Muqdisho waxaana xaley ka qaaday Muqdisho meydkiisa diyaarad ciidamada Maleysiya RMAF C-130 iyadoo sidoo kale la soo qaaday 50 xubnood oo Muqdisho u tagey hawlo samafal.
Waalidka filimqaadaha oo kala ah Aabe Mohd Nor Mat Yassin,oo 66 sano jir & Hooyo Naemah Abd Majid oo 63 sano jir, qoyskiisa & dad kale ayaa ku sugnaa saldhigada ciidamada ee laga soo dajiyey meydka Nor.
Sidoo kale waxaa ku sugnaa goobtaasi Ra’isalwasaaraha Maleysiya Datuk Seri Najib Abdul Razak & xaaskiisa Datin Seri Rosmah Mansor, Ra’isalwasaare kuxigeenka Tan Sri Muhyiddin Yassin & xaaskiisa Puan Sri Norainee Abdul Rahman & waliba xubno ka mid ah golaha wasiirada
Naxashka ama sanduuqa lagu sidey meydka Noramfaizul ayaa lagu xardhay calanka wadanka ayaa loo qaaday Masjidka Al- Islah halkaasi oo loogu sameeyey duco & salaadii Janaasada ka hor intii aan la duugin.
Naemah oo ah Noramfaizul, hooyadiis oo aad uga muregaysan Nor oo ah wiilka kaliya ee lix ilmood oo ay dhashay ayaa sheegtey in ay aad uga naxday geerida wiilkeeda.
“Wuxuu ahaa nin qoys, aad ayuu noogu xirnaa, inkastoo mar hore uu guursadey oo uu caruur lahaa, hadana wuu I tixgalin jirey, wuuna ii naxariist badnaa” ayey tiri hooyo Naemah oo wiilkeeda uu noqonayo saxafigii ugu horeeyey ee Maleysiyan ah oo lagu dilo aag dagaal.
“Intii aanu dhiman ka hor habeenimadii ayuu ila soo hadley wuxuu ii sheegay in magaaladu ay tahay bandow oo aanu ka bixi karin halka uu degan yahay, waxaana uu inaga codsadey inaan u soo duceyno oo aan ILAAH u barino bad qabkiisa, wuxuu ii sheegay xitaa in suugada cuntada oo aan u sameeyey inay ka dhamaatey” ayey tiri hooyo Naemah.
Nor xaaskiisa Norazrina Jaafar oo 37 sano jir ayaa sidoo kaloo xustey inaanay aheyn markii ugu horeysay ee saygeeda uu u ambabaxo safar qatar ah oo uu ku aadayo meelo ay xiisado colaadeed ka aloosan yihiin, waxay sheegtey in sanadkii hore ciidii Soonfur oo kale in uu ambabaxay wadanka Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza halkaasi oo uu aadan safar dhanka bini’aadamtinimada ku saleysan.
Ra’isalwasaaraha Maleysiya Datuk Seri Najib Abdul Razak ayaa sheegay in aanay cidna laheyn wadankiisa laheyn masuuliyada dhimashada Noramfaizul isla markanaa xitaa hadii loo xiri lahaa jaakada xabada celsha uu dhiman lahaa, maadama ay tahay wax ILAAH u qadaray.
Daawo Video ku saabsan aaska marxuum Nor & waliba hooyadiis oo ka hadleysa dareenkeeda.
Falastiin Xasan Ciise
SBC Kuala Lumbur
Inaali laahi wa inaalilaahi raajucuun Allaah waxaan uga bar yayaa in uu u naxariisto janatul fardawsana ka waraabiyo eheladiisa iyo qarabadiisana samir iyo iimaam Allah ha ka siiyo